Sheekada filimka Kaalakandi: Saif Ali Khan filim safar oo aan xiiso laheyn ayuu la yimid | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Kaalakandi: Saif Ali Khan filim safar oo aan xiiso laheyn ayuu la yimid
Sheekada filimka Kaalakandi: Saif Ali Khan filim safar oo aan xiiso laheyn ayuu la yimid
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Kaalakandi ee Saif Ali Khan hogaamiye ka yahay sidoo kalena ah filim aan hadal heyn xoogan wadanin balse ha isku haleenayo in fariintiisa uu kusoo jiiran karo daawadayaasha reer magaalka ah ee loogu tala galay.
Jilaayaasha filimkaan: Saif Ali Khan, Akshay Oberoi, Isha Talwar, Sobhita Dhulipala, Kunaal Roy Kapur, Deepak Dobriyal, Vijay Raaz, Shivam Patil, Amanda Rosario, Shenaz Treasurywala
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Kaalakandi: Bandhiga adag ee Saif Ali Khan sameeyay iyo safarka daroogada ku dheehan oo xoogaa feejignaan ku galinaayo.
Muxuu Ku Liitaa Kaalakandi: Ujeedka loo sameeyay ma caddo, malahan fariin isku daba dhacsan xiiso gaar ahna ma xambaarsano.
Daawo Ama Ha Daawanin: Hadii aad firaaqo heysid filim Saif bandhigiisa kaliya wacan yahay daawo ee kama heli doontid fariin kusoo jiidato.
Fariinta Filimka Kaalakandi Oo Kooban: sheekadan filimkaan waxay ku saleesan tahay wadooyinka Mumbai ee xiliga habeenkii firaaqada ah, waxaan isku soo aadayaan sedex qof oo noloshooda kala duwan tahay balse habeenka kulminaayo.
Rileen (Saif Ali Khan) waa nin caafimaadkiisa marwalbo ka wal walo xaalka ku xumaanayo marka loo sheego inuu kansarka caloosha qabo, wuxuuna doonayaa inuu sameeyo inta nolosha ka harsan wax uusan horey u sameynin.
Rileen (Saif Ali Khan) wuxuu isticmaalaa kaniini kaalmaati ah oo awood siinayo ka hor inta uusan geeriyoonin wuxuuna ku laabanaa deegaankiisii hore si uu kaga qayb galo xaflada arooska walaalkiis Angad (Akshay Oberoi).
Haweeney Sobhita Dhulipala iyo jaceylkeeda Kunaal Roy Kapur waxay ka qayb galayaan xaflad dhalasho dhalasho oo uu saaxiibkeed dhigay Shernaz Treasury ka hor inta aysan Mareekanka u safrin iyo waxa habeenkaas kala qabsanaayo sedexda qofood ee hal meel ku wada kulmayaan.
Labo Gaangester Vijay Raaz iyo Deepak Dobriyal oo hal habeen qorsheenayaan inay lacag si kadis ah ku helaan iyo wada qaldan oo ay adeegsanayaan.
Dhamaan Sedexaas Nolol Xiriir Toos Ah Kama Dhaxeeyo Balse Waxaa La Isugu Keenay Filim Magacaiisa La Dhaho Kaalakandi!
Maxaa Laga Yiri Sheekada Kaalakandi: Director Akshat Verma waa qoraagii filimka Delhi Belly ee Hit-ka ahaa balse markan masuuliyada filim sameynta ayu qaatay wuuna ku hungoobay madaama fariintiisa aysan noqonin mid isku xiran inkastoo uu isku day wanaagsan sameeyay.
Bandhiga Jilaayaasha: Saif Ali Khan bandhig heer sare ah ayuu la yimid weliba fariintaan aan looga baranin si heer sare ah ayuu u matalay waana qofka loo daawan doono filimkaan sedex fariin oo is garab socoto la isugu keenay.
Laakiin Saif Ali Khan waxaa laga rabaa inuu mashaariic wanaagsan doorada madaama xirfadiisa iyo qaab jiliinkiisa heerka sare ah meel cidlo ah uu dhawaanahan ku luminaayo!
Dhamaan jilaayaasha kale ee filimkaan wa kuwo qaab jiliin liito iyo mid dhex dhexaad isugu jiro la imaadeen waxaana ugu wacan qaabka fariinta loo dhigay oo aan xiiso laheyn.
Gunaanad: Kaalakaandi gabi ahaanba u daawo bandhiga heer sare ee Saif Ali Khan sameeyay laakiin filim xun ama lito atoore kaligiis looma daawan karo waxaana la siiyay 2/5 qiimeynta sheekada filimkaan taasi oo muujineyso inay aad u liidato.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Kaalakaandi:
Waxaa Aqrisay 514